Airport Bremen Wayfinding System - Dhizaini magazini
Wayfinding System Iyo yepamusoro-inopesana dhizaini yemazuva ano uye ruzivo rwakajeka Hirarchie rinosiyanisa hurongwa hutsva. Iyo yekutarisa system inoshanda nekukurumidza uye ichaita yakanakira kumhando yekushandira inokwanisa airport. Inonyanya kukosha nzira iri padyo nekushandiswa kweiyo font nyowani, iyo inoparadzanisa museve chinhu kuiswa kwemamwe akasiyana, akakwirira-musiyano mavara. Yakanga iri kunyanya pazvinhu zvinoshanda uye zvepfungwa, senge kuoneka kwakanaka, kuverenga uye chipinganidzo-chisina ruzivo rwekurekodha. Zvitsva zvealuminium kesi zvine zvazvino uno, zvakagadziriswa LED kuvhenekera zvinoshandiswa. Signage shongwe dzakawedzerwa.
Zita rechirongwa : Airport Bremen, Vagadziri zita : Geissert Thomas, Izita remutengi : TEAMGEISSERT.
Wayfinding System Geissert Thomas Airport Bremen